स्कूल छुट्टी ! अब के गर्ने-Setoghar
स्कूल छुट्टी ! अब के गर्ने
बालबालिकालाई रमाइलो ठाउँ मनपर्छ । स्वतन्त्र भएर खेल्न, दगुर्न, बोल्न र काम गर्न पाइने ठाउँ नै रमाइलो ठाउँ हो । त्यो ठाउँमा साथीहरु पनि हुनुपर्छ, मिल्ने र सँगसँगै रमाउने । त्यस्तो रमाइलो ठाउँ कहिले घर हुन्छ त कहिले स्कूल, कहिले घर र स्कूल दुबै हुन्छन् त कहिले दुबै ठाउँ हुँदैनन् । जो कोहीलाई पनि जहाँ रमाइलो लाग्छ त्यही ठाउँमा जान पाउनु वा रमाइलो नलाग्ने ठाउँमा जान नपर्नु नै आनन्दको कुरा हो । केही बालबालिकालाई स्कूल जाने दिन रमाइलो लाग्छ, केहीलाई स्कूल बन्द भएको दिन । स्कूलहरुले जाडो र गर्मी समयमा लामो अवधि बिदा दिने गर्दछन् । कुनै स्कूलले त एक महिनासम्म पनि बिदा दिन्छन् । यहाँ उल्लेख गरिएका दुवै खाले विद्यार्थीका लागि यो बिदाको समय सुखद् कसरी बन्छ ? यही विषयमा केन्द्रित भएर यहाँ कुराकानी गर्ने जमर्को गरिएको हो ।
स्कूलहरुले दिने होमवर्कले घरघरमा एक किसिमको तनावको सिर्जना गर्ने गरेको अनुभव हामी धेरैसँग छ नै । एक त बालबालिकाले नसिकेको विषयमा दिइएको कामले अप्ठ्यारो पार्छ, अर्को फरक खालको काम दिने भनेर अभिभावकको सहयोगमा पनि गर्न नसकिने र अस्पष्ट खालको काम दिनाले समस्या निम्तिन्छ । लामो समयको बिदामा पनि यही अनुभवको पुनरावृत्ति नहुने कुरामा संशय छैन । यसर्थ लामो समय अवधिको बिदालाई कसरी आनन्ददायक बनाउने भन्ने विषयमै प्रवेश गरौं ।
बिदा शुरु हुने दुइ दिन अघिसम्म बालबालिकाहरु बिदाप्रति सकारात्मक हुन्छन् । जब बिदा शुरु हुने अघिल्लो दिन आइपुग्छ, एकाएक उनीहरुको कान्ति क्षय हुन्छ । सबै शिक्षकहरु मिलेर यति धेरै होमवर्क दिइन्छ कि साविक दिनमा भन्दा धेरै गुणा बढी । अनि दिइने काम पनि निरसिलो र उही नोट बनाउने, ह्याण्डराइटिङ्, कोर्सबुकको अभ्यास फेरि गर्ने, रिपोर्ट दोहो¥याएर गर्ने यस्तै । बालबालिकालाई बोझ लाग्ने र नाक खुम्च्याउने खालका काम दिएर के हासिल होला ? आनन्दकासाथ सिकाई हुने वातावरण बनाउन हामी लागिपर्ने कहिले ?
स्कूल बिदा भएपछि के गर्ने भन्ने आआफ्नै योजना हुन्छन् । बालबालिकाको पनि व्यक्तिगत योजना हुन्छन् । सिर्जनात्मक योजनाहरु भएरै पनि सुनाउन सकिरहेका नहुन सक्छन् । यसर्थ सुनौं उनीहरुका योजना पनि । सोही योजनालाई नै बिदाको होमवर्क सदर गर्न नसकिने कुनै बाधाव्यवधान हुँदैन । नभए, योजना बनाउन लगाउन पनि सकिन्छ । रुचि र क्षमताका आधारमा तय गरिएका योजना अनुसार बिदा मनाउँन दिन किन कञ्जुस्याइँ ? बरु, काम आफैं तय गर्ने, योजना बनाउने र आफूले दख्खल राख्ने विषयमा एकचित्त भएर काम गर्ने सोच र बानी विकास हुनमा सघाउ पुग्छ ।
सामान्यतया परीक्षाको तनावबाट भर्खरै छुटेको बालकलाई दिक्दारिलो काममा नलगाउनु नै सुन्दर हुन्छ । लाखौं विद्यार्थी स्वयम्लाई प्रश्न गर्छन्, यति लामो अवधिको बिदामा के गर्ने ? यस प्रश्नको उत्तर रोचक होस्, सुरुचिपूर्ण होस्, कपी एण्ड पेष्ट गर्ने काम नहोस्, मनमस्तिष्क र हात एकसाथ चल्ने ‘कार्य’ होस् ।
यसै सन्दर्भमा लामो अवधिको बिदामा स्कूल तह अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई कस्तो काममा संलग्न गराउने भनेर प्रश्न सोधियो, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक नेता, लेखक, पत्रकार, कलाकार, शिक्षविद्, राजनीतिक व्यक्ति, किसानहरुसँग । स्वदेश र विदेश, गाउँ र शहरमा बस्नेहरुसँग । केहीले जवाफ दिनुभएन । केहीले मलाई नै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो के गर्ने होला त भनेर ।
केहीे यस प्रकारका उत्तर आएः
 कृषकका छोराछोरीलाई खेतबारीमा पठाइदिउँ कि बा–आमाले के गर्छन्, हेरुन् र जानून् । व्यापारीका लागि त्यतै पठाइदिउँ । अनि शनिबारीय शिविर बनाऔं, एक अर्काका कुरा सेयर गराउँ । फेरि साटफेर गरौं, व्यापारीका छोराछोरी खेतमा, कृषकका छोराछोरी पसलमा । अनि फेरि सेयर गराउँ । सानालाई साना कुरा, ठूलालाइ ठूला कुरा, वर्षे बिदामा घुम्न नपठाउँ । जोखिम हुन्छ । हिउँदमा घुमाइदिउँ । तालिका बनाउँ, वर्षे हिउँदे किन कुर्नु । २, ३ दिनका बिदा पनि उपयोगी हुन्छन् । सामाजिक र विज्ञान अनि भाषाका परियोजना कार्य दिउँ ।
 पढ्ने काममा होमवर्क कम दिने । बालबालिकाहरूको इच्छा र चाहना बुझेर सोहीअनुसार गर्दा उत्तम होला ।
 किताबी ज्ञानभन्दा परतिर भ्रमण, भेटघाट, मनोरञ्जन र खेलकुदमा सहभागी गराई सिर्जनशीलता अभिवृद्धिमा जोड गर्ने ।
 विद्यार्थीले बोझ अनुभूति नगर्ने खालका सीप र रुचि अनुसारका काम, जस्तो काष्ठकला, ओरिगामी आदि ।
 स्कूलले दिने होमवर्कको पहाड नभए हुने, सिकाइ शिविरहरु चलाउने ।
 नाटक, नृत्य, कला, खेलकुद, कलिग्राफी, योगामा सहभागी गराउने ।
 स्वतन्त्रता दिने इच्छाबमोजिमका काममा तर कार्टून र कमिक्समा असीमित समय दिने क्रम रोक्ने ।
 सामुदायिक कार्यमा संलग्न गराउने र समाजसँग निकट हुन मद्दत गर्ने ।
 मौसम अध्ययन र विश्लेषण गर्ने गराउने ।
 नेतृत्व विकास कार्यशाला, लेखन कार्यशाला गराउने ।
 सामाजिक कार्य गर्ने जस्तो कि स्वास्थ्य शिविर, जन्मदर्ता अभियान आदि ।
 सुशुप्त क्षमता विकास गराउने र व्यवसायिक खालका तालिम, कार्यशाला र कार्यक्रम गर्ने ।
 कोर्सभन्दा बाहिरको पुस्तक पढ्न भन्ने । बिदापछि कुनकुन पुस्तक पढे भनेर कुरा गर्ने जसले गर्दा कुन विद्यार्थीको रुचि केमा छ नि थाहा हुन्छ ।
 ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकसँग इतिहास, संस्कृति र जीवनशैली बारे अन्तरवार्ता लिने ।
 वृक्षारोपण अभियानमा सहभागी गराउने ।
 कम्तीमा ‘वन नाइट स्टे’ सहितको हाइकिङ्मा जाने ।
 उमेरका आधारमा व्यवसायिक सीप विकास तालिममा सहभागी गराउने र भविष्यका लागि तयारी गर्न सघाउने ।
 पढेका सैद्धान्तिक कुराहरुलाई घरमा, समाजमा व्यवहारिक रुपमा उतार्न लगाउने ।
 स्कुलमा सिकाइएका कुराहरु, पुस्तकका विषयवस्तुहरु बिदा अवधिको जीवनमा कहाँकहाँ कसरी प्रयोग भए सो विषयमा कुनै रचना, प्रतिवेदन वा छलफलका लागि सामग्रीहरु तयार गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
 आविस्कार गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने ।
 समाजका विविध विषयमा सर्वेक्षण गर्ने काम दिने, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने खालका काम दिने ।
 प्रकृतिमा रमाउन, फोटो खिच्न, चित्र कोर्न, गाउँन नाँच्न, सिर्जना गर्न दिने । प्रकृतिको खुल्ला किताबमा आनन्द लिन दिने ।
 दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु बनाउन लगाउने ।
 उमेर समूह अनुसार उनीहरुको इच्छा र चाहनालाई समेट्दै रचनात्मक क्रियाकलापमा समावेश गर्ने ।
 घुम्न छोड्दिउँ । देख्छन् ,भोग्छन् अनि आफ्नै अनुभूति लेख्छन् । सिकाइ आफ्नै ढंगले गरेको ज्ञान हो ।
कसैले पनि जे भइआएको छ त्यही ठीक छ भन्नुभएन । बेग्लै किसिमले सिक्ने वातावरण तयार गर्नेतर्फ नै सबैको औंला तेर्सिएका छन् । यसको आशय के हो भने अब परम्परागत सिकाइ संस्कार तोड्नु जरुरी भइसक्यो ।
केहीले भने यसो भन्नुभयोः
 हाम्रो त लामो बिदा नै हुन्न गाउँ लानै⁄जानैै नपाइने ।
 म त जान्दिनँ, हामीले कहिल्यै त्यस्तो अनुभव गर्न पाएको भए पो । लेख्दैमा जिन्दगी गयो । कत्ति धेरै होमवर्क हुन्थ्यो भ्याकेसनको, लेख्नुपर्नी ।
 हाम्रोमा स्रोत र सुबिधाको अभाव छ, अभिभावको आयस्तर आदिका कारण कठिनाइ छ ।
 बालबालिकालाई स्वतन्त्र छाडिदिऔं र हेरौं एकपटक । के हुने रहेछ, के गर्ने रहेछन् । किनकि लेख्न दिइने होमवर्कलाई बोझ मान्न थालिएको छ ।
तल केही कामहरु सूचीकृत छन् ।
यी कामहरु स्वतन्त्र रुपमा आफैं गर्न सकिने काम हुन् भने विद्यालय वा अभिभावकले गर्नगराउन सकिने कामहरु पनि हुन् ।
 खेल खेल्नु बालबालिकाको पहिलो र उत्कृष्ट रोजाइ हो । भरपूर खेल्न दिने ।
 संसारका विभिन्न उत्कृष्ट फिल्म हेर्ने । फिल्म हेर्ने भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउनु पर्दैन । निश्चित फिल्म हेर्ने र समीक्षा लेख्ने पनि काम दिन सकिन्छ ।
 सिकाइमूलक यूट्युब भिडियो हेर्ने र हेर्न दिने ।
 साथी समूहसँग धेरै, छिट्टै र आनन्दसाथ सिक्न सकिन्छ । हामी प्रौढलाई पनि रमाइलो लाग्छ साथीसँग रहँदा । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने अवसर दिने ।
 विगतको समीक्षा र आगामी यात्राको तयारी गर्ने ।
 कुनै पेशा गर्ने वा स्वयम्सेवा गर्ने ।
 अनलाइनबाट नयाँ भाषा सिक्ने ।
 रुचि र आवश्यकता अनुसारका अनलाइन कोर्स लिने ।
 सीपमूलक काममा संलग्न हुने जस्तै चित्रकला, भाषणकला, पाककला ।
 रुचिमा आधारित प्रोजेक्ट गर्ने, नयाँ सामान निर्माण गर्ने, प्रोजेक्ट वर्क गराउँने ।
 पुस्तक, पत्रपत्रिका, ग्रन्थहरु पढ्ने् ।
 साथी, शिक्षक, नातेदार र परिवारका सदस्यलाई धन्यवाद पत्र लेख्ने ।
 दैनिकी लेख्ने र एउटा पुस्तक वा पुस्तिका तयार गर्ने ।
 किताब नै लेख्ने जस्तो कि उपन्यास ।
 आफ्नै परिवारको इतिहास खोजी गर्ने र लेख्ने ।
 धेरैभन्दा धेरै अग्रजसँग ‘करियर’ बारे कुरा गर्ने र कुराकानीलाई भिडियो वा लिखित रुपमा तयार गर्ने ।
 नयाँ सोख पनि बनाउन सकिन्छ जस्तै फोटोग्राफी, बगैँचा निर्माण ।
 आफ्नो घरको वरपर र कोठा सरसफाइ गर्ने र सजाउने ।
 भ्रमण गरेको स्थान वा बिदामा भएका घटनालाई खिच्ने र फिल्म बनाउने ।
 भाइ बहिनीलाई खेल्न, काम गर्न र सिक्न सहयोग पु¥याउने
 घरमा, खेतमा, पसलमा सके अनुसार काम गरेर अभिभावकलाई सहयोग गर्ने ।
 कम्प्युटरमा काम गर्ने, टाइपिङ् स्पीड बढाउने ।
 नजिकैको विद्यालय, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय जस्तो कि अदालत वा मालपोत, पुस्तकालय भ्रमण गर्ने ।
 नातेदार र साथीसमूहलाई समय दिने, सहयोग गर्ने ।
 हाइकिङ्, पिकनिक, प्राकृतिक क्षेत्र भ्रमण आदिमा रमाउने ।
माथि उल्लेख भएका कामहरु सबै भेग, सबै तह, सबै उमेर समूह र सबै समयका लागि होइनन् । परिस्थिति र अनुकूलताका आधारमा यी कामहरु गर्नगराउँन सकिन्छ भन्ने नमुना खेस्रा हो । यी कामहरु गर्नुगराउँनुपूर्व दिइने सूचना प्रष्ट हुनुपर्ने कुरामा भने विशेष जोड दिन चाहन्छु ।
बिदाको अवसरमा होलिडे क्याम्प गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । एउटा गाउँ, शहर वा टोलमा एउटा शिविर चलाउँने । सिकाइ उत्सवको रुपमा नियमित काम गर्ने । स्थानीय सरकारले यस कार्यमा सहयोग गर्न सकोस् । अभिभावकले पनि बिदाको समयमा विद्यालयले दिएको होमवर्क गर्न मात्र बल नगरे हुन्थ्यो । केही समय सँगै बिताउने गरी केही योजना बनाउन सके अझै राम्रो हुन्छ । बिदाको समयमा के काम दिने भनेर शिक्षक र विद्यालयले पनि एकपटक राम्ररी सोचे हुन्थ्यो । अभिभावकको अवस्था, बाध्यतालाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी हुन्छ । स्थानीय सत्यमा टेकेर काम गर्नगराउन लगाउनुपर्छ ।
यसो पनि हुनसक्छ कि बिदा दिने प्रचलन र विद्यालय उपस्थितिलाई कानुन झैं अनिवार्य ठान्ने प्रथालाई बिर्सेर सिकाइ उत्सवका रुपमा स्कूल चलाउने । यसो भनिरहँदा सांस्कृतिक पर्व, प्राकृतिक बाधा, स्थानीय वा राष्ट्रिय विशेष घटनाहरुमा स्कूल छुट्टी गर्नुपर्ने कुरा बिर्सिएको होइन ।
माथिका बुँदाहरु पढिरहँदा, लेखिरहँदा र यस विषमा सोचिरहँदा मनमा निरन्तर उठिरहेको एउटा प्रश्न छ, के हरेक दिन हरेक छिन शिक्षण सिकाइको उत्सव चलाउँन हुँदैन र ?
– लेखक साहित्य, शिक्षा र शैक्षिक सहजीकरणका क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।